सिक्ने र सिकाउनु नै जिन्दगी हो : तृष्णा | Screennepal
सिक्ने र सिकाउनु नै जिन्दगी हो : तृष्णा
२०७३, १३ पुष बुधबारscreennepalCeleb bites, hot news0
अहिलेकी ब्यस्त तथा चर्चित फेसन डिजाईनर हुन् तृष्णा गुरुङ । उनलाई देश तथा स्वदेशमा कामको चटारो छ । डिजाईनर तृष्णाले मिस गुरुङ इन्टरनेसन र दुवईमा फेशन शो इभेन्टस पनि आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेकी छिन् । नवलपरासीको कावासोतीमा जन्मिएर काठमाडौंलाई कमथलो बनाएकी गुरुङले लाजिम्पाट पानीपोखरीस्थित मृगतृष्णा नामक बुटिक सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । ‘अल्वेज थिङ पजेटिभ एण्ड गेट पजेटिभ’लाई मन मस्तिकमा लिएर कामलाई निरन्तरता दिने उनै गुरुङसँग स्क्रीन नेपालका लागि लेक्स गुरुङले गरेको कुराकानी :
हालै नेफ्टा अवार्डमा अफिसियल फेसन डिजाईनरका रुपमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो । कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ ?
ओभरअलमा अवार्ड कार्यक्रम रामै भयो । अवार्ड कार्यक्रमका साथै मेरो दुवईमा हुन लागेको फेसन शोको मिटिङ पनि राम्रो भएकाले दुबईको यात्रा मलाई ब्यक्तिगत रुपमा फाइदाजनक भयो ।
नेफ्टा अवार्डको म्यानेजमेन्ट त्यति राम्रो थिएन भन्ने हल्ला आएको थियो । के साँचो हो ?
म्यानेजमेन्ट राम्रो थिएन भन्ने कुरामा मचाहिँ सहमत छैन् । यति ठूलो इभेन्टमा सानो मसिनो कमिकमजोरी त भइहाल्छ नि ।
तपाईको आगामी प्रोजेक्टहरु के—के छन् ?
नेपालमा चाहिँ फिल्मको कामहरु गर्दैछु । र, चाडै मिस गुरुङ इन्टरनेशनल ब्युटि प्याजेन्ट गर्दैछु । त्यसको साथसाथै विदेशमा हुने इभेन्टहरुको काममा पनि ब्यस्त छु । २०७३ सालसम्म मेरो सबै इभेन्टको कामले गर्दा मेरो सेडुल प्याक छ ।
नेपालमा यति धैरै जातिय ब्युटि प्याजेन्टहरु हुन्छ । मिस गुरुङ इन्टरनेसनल गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
उद्देश्य नै भन्ने छैन् । जातिय ब्युटि प्याजेन्ट भन्नाले हरेक जातिको आ—आफ्नै संस्कार–सस्कृति हुन्छ । पक्कै पनि मैले पनि गुरुङ जातीको पहिचान, संस्कृति, भेषभूषा विदेशमा बस्दै आइरहेका गुरुङ यवतीलाई सिकाउनु हो । जो विदेशमा होस् या नेपालको विभिन्न ठाउँमा बस्ने गुरुङ युवतीलाई आफ्नो जातिको रहनसहन र संस्कृतिको बारे अझ धेरै सिकाउनु नै मिस गुरुङ इन्टरनेसनलको मुख्य उदेश्य हो ।
मिस गुरुङ इन्टरनेसनल कहिले गदै हुनुहुन्छ ।
चाडै नै गदैछु । मिस गुरुङ इन्टरनेसनको फर्म खुल्ला गरिसकेको छु । नेपालको विभिन्न ६ ठाउमा अडिसन गर्ने तयारी भइरहेको छ । विदेशमा पनि अडिसनको तयारी तिब्र बनाएको छ ।
तपाईले जिन्दगी कसरी बुझ्नुभएको छ ?
हरेक मान्छेले आ—आफ्नो तरिकाले जिन्दगीलाई जिउने गर्छन् । तर, मेरो विचारमा जिन्दगी भनेको सिक्नु हो । म फेसन डिजाइनिङ कामलाई अगाडी बढाइ राखेकी छु र सिक्ने र सिकाउनु नै मेरो जिन्दगी हो ।
Previous Postहङकङमा रुकमानको ‘संसोधन–२०७३’ सार्वजनिक Next Postमुसहर बस्ती बनाउन बर्दिबासमा धुर्मुस